Sudan oo dalbatay in lagu taageero Qamadi (Sareen)! | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Sudan oo dalbatay in lagu taageero Qamadi (Sareen)!
Sudan oo dalbatay in lagu taageero Qamadi (Sareen)!
Dowladda Suudaan ayaa dalbatay gargaar bani aadamnimo gaar ahaan Qamadi (Sareen) si ay wax ugu qabato nolosha dadka u baahan ee kunool dalkaas maadaama gurmad xiliyo kala duwan la siiyay uu kaafin waayay.
Warbaahin kala duwan oo qaarkood kasoo baxday Suudaan ayaa sheegtay in baahida Qamadiga (Sareen) ay tahay mid taagan una baahan garab istaag joogta ah si looga baaqsado dhibaatooyinka dabiiciga ah.
Hay’adda Cunnada Qaramada Midoobay u qaabilsan WFP ayaa sheegtay in sanadkaan 2021 Suudaan siisay Sareen balse weli ay taagan tahay cabashada, qorshaha Hay’addaan ayaa ah in bixinta ku dhawaad Nus milyan Tan oo Qamadi ah.
Mareykanka ayaa sheegay in qorshaha 2021 ee Taageerada Suudaan uu gaaray 300,000 oo tan oo Qamadi ah si loo kafaalo qaado nolosha dadka u baahan ee u dhashay dalkaas oo u badan Xoolo dhaqato & Beeraley.
26-kii October 2020, Israel ayaa ku dhawaaqday in Suudaan ay siineyso Qamadi qiimo ahaan ku kacaya $5 Milyan oo Doollar oo abaalmarin ahaan uga dhigtay kadib markii todobaadkaas heshiis la gashay Yuhuudda.
Qamadiga waxa uu suudaan ka jooga meel sare, dadka ayaa aad u isticmaala waana mid kamid ah cunnooyinka ugu badan ee laga jecel yahay dalkaas marka la barbar-dhigo kuwa kale sida ay sheegeen dad kunool meelo kala duwan oo waddankaas ah.
Maqaal horeGalmudug iyo Itoobiya oo Wardheer ku gaaray heshiis ka kooban laba qodob
Maqaal XigaDagaal khasaaro geystay oo ka dhacay degaan ka tirsan Gobolka Sanaag